जहाँ किन्न पाइन्छ १ सय ३६ रुपैयाँमा सिङ्गै घर ! - नागरिक रैबार
बुधबार, जेष्ठ ११, २०७९
जहाँ किन्न पाइन्छ १ सय ३६ रुपैयाँमा सिङ्गै घर !
मङ्लबार, चैत्र २२, २०७८
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण विश्वका विभिन्न देशमा मानिसहरुको पेशा व्यवसायमा ठूलो असर पर्‍यो ।लाखौँ करोडौँ मानिसहरुले ठूलो आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो । संसारका कतिपय देशमा घरजग्गा व्यवसायमा ठूलो गिरावट आयो र भाउ निकै खस्कियो । तर कोरोना मथ्थर भएसँगै व्यवसाय पुनः मुर्झाएको छ ।
उता कतिपय पश्चिमा देशमा चाहीँ पूराना घरहरु बेच्नका लागि स्थानीय प्रशासनले केही शर्तहरुका साथ एक डलर वा एक युरोको स्कीम ल्याएका छन्। बेलायमा बस्ने एक जना अष्ट्रेलियाली नागरिकले इटालीको सिसिलीस्थित मुसोमेलीमा केवल १ युरो अर्थात् करीब १ सय ३६ रुपैयाँमा एउटा घर किनेका छन् ।
उक्त ठाउँमा १ युरोमा घर खरीद गर्नका लागि मानिसहरुले तछाडमछाड गरे । यद्यपि १ युरोमा घर किनेका ती व्यक्तिले अब त्यो घर छाड्नुपर्ने भएको छ । किनकी शर्त अनुसार उनले ३ वर्षभित्रमा उक्त पूरानो घरलाई जिर्णोद्धार गर्नुपर्नेमा गरेका छैनन् । आफ्नो घर जिर्णोद्धार गर्नका लागि कामदार नपाएको गुनासो उनको छ ।
डेनी म्याक्कुबिन नामक ती व्यक्तिले सिसिलीको केल्टानिसेटा प्रान्मा रहेको मुसोमेलीमा एक युरोमा एउटा पूरानो घर किनेका थिए । मुसोमेली सहरको स्थापना १४ औँ शताब्दीमा म्यानफ्रेडो तृतीय चियारामोन्टेले म्यानफ्रेडीको नाममा गरेका थिए ।
पछिल्लो समयमा खाली बन्दै गएको यो सहरमा विदेशीहरुलाई बसाल्नका लागि स्थानीय प्रशासनले १ युरोमा घर दिने परियोजनाको सुरुवात गरेको थियो । सोही परियोजना अन्तरगत नै म्याक्कुबिनले घर किनेका थिए ।
इटालीमा घरमालिक बन्नु अगाडि उनी १७ वर्षसम्म बेलायमा बसे । घर खरीद गरेको एक वर्षपछि उनले जिर्णोद्धार गर्नका लागि कामदारको खोजी गरे तर कामदार फेला परेनन् ।
वास्तवमा पछिल्ला केही महिनादेखि इटालीमा पूरै देशभरि नै श्रमिक अभाव छ । अन्ततः सरकारी शर्त अनुसार जिर्णोद्धार गर्न नसकेपछि उनले १ युरोमा किनेको घर छाड्नुपर्ने भएको हो । एजेन्सीको सहयोगमा
दिवा खाजामा अनियमितता गरेको आरोपमा हेडमास्टर पक्राउ
गैर सरकारी संस्था महासंघ बाजुराकाे अध्यक्षमा अधिकारी चयन
बाजुरा जिल्लाका ३ ओटा मतदान स्थलमा प्रहरीले गर्याे हवाई फाएर
बाजुरामा मतदाता परिचयपत्र चोरी आरोपमा पक्राउ
समाजवादीका जिल्ला सचिव रावतमाथि काँग्रेसका कार्यकर्ताले यसरी खुकुरी प्रहार गरे (भिडियोसहित)
काँग्रेस बाजुराका पुर्व सचिव अएडीले गरे त्रिबेणीकाे मेयरमा स्वतन्त्त्र उम्मेदवारी दर्ता
मेयरको उम्मेदवार बनेका खातीलाई जिताउन पुनः मतदानको षड्यन्त्र गरिँदै छः कर्ण थापा
बाजुरामा बुढीगंगा ७ र जगन्नाथको २ नम्वर वडामा मतदान स्थगित
कलियुगका राम ! पत्नीको अग्नि परीक्षा लिन हत्केलामा कपूर जलाए !
रामायणमा उल्लेख भए अनुसार रावणले अपहरण गरेर लगेकी सीतालाई फिर्ता ल्याएपछि सीतामाथि परपुरुषसँग बसेको भन्ने आरोप लाग्यो र सोही शंका दूर गर्नका लागि रामले सीतालाई अग्नि परीक्षा दिन लगाए । रामायणमा वर्णित कथा त्रेता युगको हो । युग बदलिएर अहिले कलियुग छ । मानव सभ्यता निकै समुन्नत भैसकेको छ । विश्वमा विज्ञान प्रविधिले चमत्कार गरिरहेको […]
कहिले भयो ऐनाको आविष्कार ? को हुन् ऐना हेर्ने पहिलो व्यक्ति ?
काठमाडौं । ऐना नहुँदो हो त के हुन्थ्यो होला ! कहिल्यै सोँच्नुभएको छ ? वास्तवमा ऐना सानो चिज भैकन पनि मानव जिवनको अभिन्न हिस्सा भैसकेको छ । हामी कस्तो देखिन्छौँ ? कस्तो देखिन चाहन्छौँ ? आफ्नो स्याहार गर्ने, श्रृंगार गर्ने तथा आफ्नो जिउको तथा अनुहारको ख्याल गर्नका लागि हामीलाई ऐनाले नै सिकाएको हो । तर […]
मरेपछि आफन्तकै लास खाने परम्परा !
संसारमा यस्ता धेरै आदिवासी समुदायको बसोबास छ, जसका बारेमा आम मानिसहरूलाई थाहै छैन । कतिपय आदिवासी समुदायका रितिरिवाज, परम्परा तथा संस्कृतिहरू यस्ता छन्,जसको बारेमा थाहा पाउँदा पत्याउनै गाह्रो पर्दछ । कतिपयका संस्कार तथा परम्पराहरु निकै हिंस्रक, दर्दनाक तथा अनौठा छन् जुन आधुनिक मानव समुदायका लागि अपाच्य हुनसक्दछन् । यस्तै अनौठो परम्परा भएको आदिवासी समुदाय हो […]
बसमा यात्रा गर्ने कुखुराको भालेलाई ३० रुपैयाँको टिकट
भारतको तेलंगानामा बसको यात्रा गर्ने कुखुराको भालेलाई ३० रुपैयाँको टिकट थमाइएको छ । तेलंगना प्रान्तको सरकारी बसमा यात्रा गरिरहेको उक्त कुखुराका लागि बसका कन्डक्टरले भारु ३० को टिकट काटिदिएका हुन् । तेलंगानाको करिमनगरमा उक्त घटना भएको हो । बस कन्डक्टर जी तिरुपतिले आफ्नो बसमा एकजना यात्रुले कुखुराको भाले बोकिरहेको देखे । मोहम्मद अली नामका ती […]
जब चोरले काटेर लग्यो ६० फिट लामो पुल
तपाईंले चोरीका अनेक खाले घटनाका बारेमा देख्नु, सुन्नुभएको होला । तर के तपाईंले चोरले पूरै पुल चोरेको सुन्नुभएको छ ? भारतको बिहारमा एउटा पूरै पुल नै चोरी भएको अनौठो घटना भएको छ । बिहारको रोहतास जिल्लामा यो घटना भएको हो । त्यहाँ ६० फिट लामो पुल चोरी भएको हो । बिहारको रोहतास जिल्लाको नासरीगंज क्षेत्रस्थित […]
वैज्ञानिकको अनौठो खुलासा : च्याउले गर्न सक्छ एक अर्कामा कुराकानी
बेलायती वैज्ञानिकहरूले एउटा अनौठो तथ्य पत्ता लगाएका छन् । युनिभर्सिटी अफ द वेस्ट अफ इंगल्याण्डका वैज्ञानिकहरूले गरेको एक अनुसन्धानबाट च्याउनले समेत एक अर्कामा कुराकानी गर्न सक्ने तथ्य पत्ता लागेको हो । यतिमात्र होइन च्याउसँग ५० वटा शब्दको शब्दकोष पनि हुने दाबी वैज्ञानिकहरूको छ ।वास्तवमा यस्तो कुरा पत्याउनै गाह्रो लाग्दा र तर प्राध्यापक एन्ड्रयू एडमाट्ज्कीले विभिन्न […]
निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउन जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाजुराको आग्रह
थप १६ जनामा कोरोना पुष्टि
पूर्वपश्चिम राजमार्ग पाँच वर्षभित्र चार लेनको बनाइने
शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मा अर्थमन्त्री शर्मालाई
स्थानीय सडकमा पुल निर्माणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइने
नीति तथा कार्यक्रम समयको बर्बादी मात्रै हो : एमाले सचिव भट्टराई
शिक्षक दरबन्दी पुनरावलोकन, दिवा खाजा कक्षा ८ सम्म विस्तार
आईएन एफ नेपालले कोल्टीमा फिस्टुला अन्त्यका लागि अन्तरास्ट्रिय दिवस मनायो
बडीमालिकाका जनप्रतिनिधिलाई इसाई समाज बाजुराद्धारा सम्मान
सुदूरपश्चिममा २६६ जनाका लागि खुल्यो जागिर, लोकसेवाले गर्‍यो विज्ञापन
बडीमालिका ९ को वडा कार्यालयमा स्थानीयद्धारा ताला